လွမ်းတတ်သူပါဆိုမှ ရယ်စရာအတွေးတွေ လာကြားနေရတယ်
သိပ်ချစ်ပါတယ်! ဒါကြောင့် ကိုဘုန်းကြီးဝတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့
ဟားဟား ( လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဖုန်းပြောနေတဲ့
တန်ဆာဆင်တဲ့ (ချိပ်) စကားတွေနဲ့
ပလိုင်းထဲက ငါ ငါးတစ်ကောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူး
ကိုယ့် စိတ်ကိုယ် ပြန်မျှားဖို့်ဆို
Posted by ko naing at 6:38 AM No comments:
အိမ်မြှောင်လေး တစ်ကောင်တောင်မှ လုပ်နိုင်ရင် ဒို့တွေ ဘာဖြစ်လို့ မလုပ်နိုင်ရမှာလဲ
ချိုးဖျက်ခဲ့တယ်။ ဂျပန်အိမ်တွေမှာ သစ်သားနံရံ တွေကြား
။ သူဟာနံရံကိုဖြိုချတဲ့အခါ ညပ်နေတဲ့
အိမ်မြှောင် တစ်ကောင်ကို မြင်ခဲ့တယ်။ အပြင်က သံတစ်ချောင်းက
အဲဒီအိမ်မြှောင်ရဲ့ ခြေတစ်ဖက်ကို ဖောက်ရိုက်ထားတာ သူတွေ့ခဲ့တယ်။ သူဟာ
အိမ်မြှောင်လေးအပေါ်သနားစိတ်ဝင်ခဲ့တယ် ။ တစ်ချိန်ထဲမှာလည်း ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့
အကြောင်းရင်းကို သိချင်လို့ သံချောင်းလေးကိုစစ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါ
သံချောင်းလေးရဲ့သက်တမ်းဟာ ပထမဆုံး အိမ်ဆောက်တဲ့ အချိန်နဲ့တွက်ကြည့်ရင် (
၁၀ ) နှစ်လောက် ရှိနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရတယ်။
တဆင့် ပြန်လည် ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Posted by ko naing at 6:29 AM No comments:
Posted by ko naing at 5:54 AM No comments:
သား မီးတွေ ပွားစီးပြီး
ခုတော့ ဂဟေဆော်သံ ထက်ညံတယ် (နားပူနားဆာလုပ်လို့)
သား မီးနဲ့ မြေးဆိုတဲ့ကြိုး
ဒီအရွယ်ထိ ရှင်နဲ့ ကျမ
( အသက်ကြီးမှ နှောင်းဖြစ်ချစ်စကားလေးတွေနဲ့ ရန်ဖြစ်ကျီစယ်နေကြတဲ့ ဒုတိယအရွယ်အိမ်ထာင်သည်များအတွက်)
Posted by ko naing at 5:44 AM No comments:
ပျော်မှ ခင်မှ ပြုံးနေကြတာ မဟုတ်ပါဘူး
အနှစ်မပါတဲ့ အဖြစ်ရယ်လို့ ကြုံကာမှ သိစေသူအတွက်
ခံစားရခက်တဲ့ မျိုသိပ်ချက်တွေ ငုပ်လျှိုးစွာဖော်ပြချင်ရင်
လိုချင်တာရဖို့အတွက် ချကျွေးမယ့်အစာ မာယာလို့
ကိုယ်မရပေမယ့် တစ်ပါးသူရရင် ဖြစ်လာတဲ့ပီတိ အပြုံး
ဘယ်လို အသုံးတွေ သုံးသုံး
အကြွင်းမဲ့ ချစ်တတ်တဲ့ မြင့်မြတ်မှုတွေနဲ့
မအိုမီ မနာမီ အသေမီ
လောကကြီးကို သန့်စင်တဲ့ အပြုံးတစ်ချက်
Posted by ko naing at 5:42 AM No comments:
ဘ၀တိုက်ပွဲဝင် ရှုံးတလှည့် နိုင်တလှည့်နဲ့
"သားလေးကျန်းမာ ချမ်းသာပါစေ" လေ
Posted by Farry Mind at 9:06 AM
Posted by ko naing at 11:19 PM No comments:
Posted by ko naing at 9:02 AM No comments:
Labels: photo, ထူးဆန်းသောပုံများ
နွေ မိုး ဆောင်း အလီလီပြောင်း လည်း
လှော်တက်ကလေးကိုင် မှိုင်မနေနဲ့ ။
လူတွေအမြင်မှာ အဆင်မပြေ လို့
မူးခိုက် ရူးခိုက်မှာ မြူးလိုက်မိပါ၏ ။
မင်းရဲ့ အပြောနဲ့ အပြုအမူများက
အပြုံးများတော့ ဆုံးပါးကွယ်ပျောက် နှောက်ခဲ့ပြီ ။
အငြိုး … ဘယ်နှယ့်ဆင်လို့
နှောင်းကံကြမ္မာ မဆုံတော့ဘူး ။
သာယာလျှင် သံသရာအမှောင်တိုး ။
Posted by ko naing at 8:45 AM No comments:
စဉ်းစားရလွန်းလို. ငါ.ဦးနှောက်တွေ ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်
ဒါပေမယ့်ပြန်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် ငါဘာအတွက်................ငိုနေရလည်း ဆိုတာရှက်လွန်းလို. ကိုယ့်မျက်နှာကိုယ် ဓားနဲပဲမွှန်းလိုက်ချင်တော.တယ်
ဘယ့်သူ.အတွက် ......ခံစားနေရလည်း ပြန်တွေးကြည်.ရင် အနာတွေများ...
Posted by ko naing at 6:19 AM No comments:
Posted by ko naing at 7:19 AM No comments:
မေ့ပုံပြင် တစ်ဝက်ဆောင်း မျက်လုံးညောင်းလို့အိပ်ခဲ့တယ်
ဖတ်ရှုပေးတာကျေးဇူးကမ္ဘာပါ။ ။ ။
"စိတ်မျှားနေကြသူများ" လွမ်းတတ်သူပါဆိုမှ ရယ်စရာအေ...
"အချစ်ကြောက်သူ" ကဗျာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းလို့ ဆရာဇေယ...
"ဆယ်စုနှစ်အချစ်တို့ရဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့အရာ" (မ) လွန်ခဲ့...
"အပြုံး တစ်ချက်"အပြုံးတဲ့ ! ပျော်မှ ခင်မှ ပြုံးေ...
တစ်နေ့နေ့ပေါ့ ......အမေ တနေ့နေ့ပေါ့ ....အမေ မို...
“ ချစ်နေဆဲပါ ငိုရလွန်းလို. ငါမျက်လုံးတွေကန်းသွားနု...
ကဗျာဆိုတာပြုလုပ်ခြင်းလို့ ဆရာဇေယျာလင်းကဆိုတယ် ပန်း...